PC thermo fitaovana
Ahoana ny famerenana ny kaontinao amin'ny Google
Ny fanadiovana tanteraka Yandex. Ny navigateur amin'ny fako
Interesting Lahatsoratra - December 16,2019
Tsy mamaly i Mozilla Firefox: ny antony fototra
Interesting Lahatsoratra 2019
Raha iTunes dia mitazona backups amin'ny ordinateranao
Ny asan'ny iTunes dia ny mifehy ny fitaovana Apple amin'ny solosaina. Amin'ny fampiasana an'io programa io, dia afaka mamorona tahiry rindrambaiko ianao ary manangona azy ireo ao amin'ny solosainao mba hamerenana ny fitaovana amin'ny fotoana rehetra. Tsy fantatrao hoe aiza no misy backups ny iTunes ao amin'ny solosainao?
Inona no dikan'ny karatra vidéo tafiditra
Ahoana ny fisafidianana router
Fampitomboana amin'ny Microsoft Excel
Ahoana no fomba hamoronana ordinatera ao amin'ny Android
Ahoana no hamahana ny olana amin'ny fampifandraisana ny Skype
Ahoana no fomba hanetsehana tsoratadidy avy amin'ny Opera
Ampiheno ny kibo amin'ny Photoshop
Ny rakitra miafin'ny Google Docs dia ampahibemaso.
Inona no atao amin'ny diso msvcr80.dll
Sokafy horonan-tsarin'ny MPG video
Esory ringtone amin'ny iPhone
Mihaino mozika tsy misy herisetra an-tserasera
Hikirakira Virtual Router 3.4.1
Androany, isika rehetra dia miankina tanteraka amin'ny Internet. Noho izany, raha manana Internet ianao amin'ny findainy, fa tsy amin'ny gadget hafa (takelaka, smartphones, sns), dia azo esorina ity olana ity raha mampiasa solosaina ho toy ny router Wi-Fi ianao. Ary ny programa Switch Virtual Router dia hanampy antsika amin'izany.
Ahoana raha mameno ilay processeur ny SVCHost 100%
SVCHost dia orinasa tompon'andraikitra amin'ny fizarana fandaharan'asa mihazakazaka sy ny fampiharana an-dàlam-be, izay mety hampihenana ny entana amin'ny CPU. Saingy tsy vita tsara foana ity asa ity, izay mety hampisy enta-mavesatra be loatra amin'ny processeur noho ny loza mafy.
Ampianay hanoratra taratasy any Outlook
Matetika, indrindra amin'ny taratasim-pandraharahana, rehefa manoratra taratasy, dia ilaina ny manondro sonia, izay, amin'ny fitsipika, dia misy ny fampahalalana momba ny toerana sy ny anaran'ny mpandefa ary ny fampahalalana momba ny fifandraisana. Ary raha tsy maintsy mandefa taratasy be dia be ianao, isaky ny manoratra ny fampahalalam-baovao dia sarotra be ihany.
Ahoana ny miditra amin'ny BIOS (UEFI) amin'ny Windows 10
Iray amin'ireo fanontaniana matetika momba ny dikan-teny farany amin'ny rafitra miasa amin'ny Microsoft, ao anatin'izany ny Windows 10 - ny fomba hidirana amin'ny BIOS. Amin'ity tranga ity, matetika dia misy UEFI (matetika manamarika ny fisian'ny sary eo amin'ny sary), dikan-teny vaovao amin'ny rindrambaiko reny, izay tonga nisolo ny BIOS marimaritra iraisana, ary natao ho azy - mametraka ny fitaovana, ny safidin-tsarimihetsika ary ny fahazoana fampahalalana momba ny rafitra .
Vondrona angona ao amin'ny Microsoft Excel
Rehefa miasa miaraka amin'ny latabatra izay ahitana andalana maromaro na andalana maro dia manjary maika ny fanontaniana momba ny fananganana tahirin-kevitra. Amin'ny Excel dia azo atao izany amin'ny alalan'ny fampiasana ny vondrona misy ny singa mifandraika. Ity fitaovana ity dia ahafahanao manamboatra ny angon-drakitra fotsiny, fa manafina fotoana tsy ilaina ihany koa, izay mamela anao hifantoka amin'ny faritra hafa amin'ny latabatra.
Top 10 tsara indrindra amin'ny fandaharan'asam-peo mafy
Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny solosaina dia tokony hamerina amin'ny laoniny ny filaminana. Ny famaha ny famaha ny famafàna dia ahafahanao manetsika ny rakitra ao anaty ampahany iray mba hahafahan'ireo singa amin'ny programa iray amina fe-potoana manaraka. Izany rehetra izany dia mamafa ny solosaina. Ny votoatin'ny Top Defragmenter Top Disk Defragmenter Ny Defraggler Smart Defrag dia mibaribary disk Defrag Disk Defraggler Smart Defrag Software Defrag Disk Defraggler Smart disk defraggler Smart disk defraggler Smart disk defraggler Smart disk defraggler Smart disk Defraggler Smart Defrag Software
Mijery ny ordinateranao amin'ny viriosy tsy misy antivirus
Esory ny ordinatera Windows.old
Inona no tokony hatao raha nosakanana tao Odnoklassniki ilay pejy
Na dia eo aza ny hoe Odnoklassniki dia iray amin'ireo tambajotra sosialy lehibe indrindra ao Runet, dia mbola tsy misy filaminana azo antoka tanteraka. Ny fifanakalozan-dresaka ao amin'ny OK indraindray dia mivoha misokatra, izay amin'ny toe-javatra sasany dia afaka miteraka olana goavana ho an'ny mpampiasa. Ny vokany amin'ny fanakanana pejy ao amin'ny Odnoklassniki Ny fanesorana pejy hafa amin'ny mpampiasa dia tsy mitranga tahaka izao, satria mitady karama ho an'ny tenany ny mpanafika.
Hanova ny lokon'ny maso ao amin'ny Photoshop
Ny fanodinana sary an-tsary dia ahitana karazana asa be dia be - avy amin'ny toning mba hanampiana fitaovana fanampiny ho amin'ny sary iray na fanovana ireo efa misy. Androany dia hiresaka momba ny fomba hanovàna ny lokon'ny maso amin'ny sary amin'ny fomba maro, ary amin'ny fiafaran'ny lesona dia afaka manolo tanteraka ny mari-pamantarana iris isika mba hahafahana maneho maso toy ny liona.
Ahoana no hamaha ny fahadisoana physxcudart_20.dll
Raha eo am-piandohan'ny lalao iray (amin'ity farany ity dia Borderlands), misy hadisoana milaza fa tsy azo atao ny manomboka ny programa, satria tsy misy ny rakitra ilaina ao amin'ny solosaina, tsy mitady izay toerana hakana ny physxcudart_20.dll, ny fametrahana ny fahadisoana dia mora kokoa. Ny rakitra physxcudart_20.dll dia tsy tafiditra ao amin'ny NVidia PhysX, izany hoe, ny fametrahana PhysX fotsiny dia tsy mametraka ny hadisoana (toy ny, ohatra, azonao atao ny mamaha ny fahadisoana physxloader.
Ny mozika rehetra dia miorina amin'ny famokarana an-tsoratra marika sasany. Na dia izany aza, raha te hifanaraka tsara amin'ny ordinatera dia ilaina ny fitaovana ampiasaina amin'ny mozika. Izany dia hanampy fitaovana rindrambaiko isan-karazany mba hanitsiana, ohatra, PitchPerfect Guitar Tuner. Safidy ny fitaovana sy ny rafitra Ity programa ity dia manana lisitra mahatalanjona ny fitaovana enti-matihanina.
SketchUp Hot Keys
Ny fampiasana ny fanalahidin'ny toaka dia manamora sy mampihetsi-po ny miasa amin'ny fandaharana rehetra. Amin'ny ankapobeny, mikasika ny famolavolana grafika sy fandaharanasa ho an'ny famolavolana sy ny endrika maodim-piteny, izay ahafahan'ny mpampiasa mampandroso ny tetikasany. Ny lojika amin'ny fampiasana SketchUp dia novolavolaina amin'ny fomba toy izany fa ny fananganana sehatra volomena dia tsotra sy mazava araka izay tratra, noho izany manana fanatanjaham-bokatra mafana dia afaka mampitombo be ny vokatra vokarin'ny asa amin'ity programa ity.
Fomba handaminana ny hadisoana "Tsy afaka mameno ny XPCOM" ao amin'ny tranokalan'ny Mozilla Firefox
Mpisera maro no mbola tsy mahita fomba hafa amin'ny navigateur Mozilla Firefox, satria ity no iray amin'ireo mpizarazara kokoa amin'izao fotoana izao. Na izany aza, tahaka ny amin'ny programa hafa mihazakazaka ao Windows, mety misy olana amin'ny mpamorona ity. Ao amin'io lahatsoratra io ihany, ny fanontaniana dia hatokana ny hadisoana "Tsy afaka mameno XPCOM" fa mety hihaona amin'ireo mpampiasa Mozilla Firefox.
Pikantsary fanaraha-mason'ny Package avy amin'ny AliExpress
Isaky ny mandidy ny entana ao amin'ny AliExpress, dia mety ho very ny lany amin'ny mpizahatany amin'ny mpizahatany. Mba handinihana ny làlan'ny tranokala avy amin'ny mpivarotra mankany amin'ny mpandray, dia misy serivisy samihafa izay mandray fampahalalana momba ny fitaterana avy amin'ireo mpitaona azy. Ity fitaovana ity dia hampiseho ny malaza indrindra amin'ireo serivisy ireo.
Inona no hatao raha malahelo ny masonao?
Ny harerahana sy ny alahelo eo amin'ny maso rehefa miasa amin'ny solosaina dia olana iray fantatra amin'ny mpampiasa rehetra. Izany dia noho ny fananana fahitana ny olombelona, ​​izay atomboka amin'ny fomba fijery ny hazavana hita taratra, ary loharanom-pahazavana mivantana mandritra ny fotoana maharitra dia tsy mahatsapa raha tsy misy ny fahatsapana mampihetsi-po.
Fomba 4 hanaovana ny pikantsary amin'ny solosaina Windows 8
Mety ho mora kokoa ny mamorona pikantsary amin'ny solosaina, satria saika fantatry ny mpampiasa rehetra momba ny fisiana sy ny tanjon'ny bokotra PrtSc. Fa amin'ny fahatongavan'i Windows 8, dia misy ny endri-javatra vaovao, anisan'izany ny fomba maro ahafahana mandray screenshots. Noho izany, andeha hojerentsika ny fomba hamonjena ny sary miainga amin'ny fampiasana ny fahafaha-miditra Windows 8 ary tsy izany fotsiny.
Avereno amin'ny rindran-damina Windows 10 ny Windows 10: ampiasao fomba hafa
Miaraka amin'ny fahamendrehan'ny Windows 10, indraindray dia misy fiantraikany amin'ny tsy fahombiazany sy ny fahadisoana samihafa. Ny sasany amin'izy ireo dia azo fongotra amin'ny fampiasana ny programa "System Restore" na programa hafa. Amin'ny toe-javatra sasany, fampivoarana hafa mampiasa rakitra fanavotana na flash mitondra sary natsangana nandritra ny fametrahana ny rafitra avy amin'ny tranonkala Microsoft na avy amin'ny haino aman-jery izay napetraka ny OS dia afaka manampy.
Download mpamily ho an'ny solosaina Lenovo B590.
Ny asa mety amin'ny fitaovana ampiasain'ny ordinatera dia tsy misy afa-tsy amin'ireo mpamily mety. Amin'ny fametrahana ireo antontan-drakitra ilaina, dia manome antoka ny fahombiazana sy ny haavon'ny fitaovana. Misy fomba maromaro ahafahan'ny mpamily miditra, manamboatra sy manavao.
Hamaritra ny famoronana GIF
Ny tahiry sary an-tsary miaraka amin'ny fanitarana GIF dia malaza amin'ny Internet. Na dia izany aza, ao amin'ny tranonkalà maro dia mbola voafetra ihany ny habetsahan'ny GIF nampidirina. Noho izany, amin'izao fotoana izao, isika dia te hanolotra fomba ahafahanao manova ny haavony sy ny sakan'ny sary toy izany. Ahoana no hanovana ny haben'ny GIF Raha toa ka rafitra maromaro ny GIF, fa tsy sary miavaka, dia tsy mora ny manova ny haben'ireo rakitra amin'ity format ity: mila editor editor ianao.
Mamorona mailaka amin'ny smartphone amin'ny Android OS
Inona no hatao raha tsy mahita ny fiara mafy ny Windows 7?
Tsy misy modem-modem amin'ny iPhone
Ahoana no hanapahana faribolana amin'ny Photoshop
Ahoana no fampidirana rakitra PDF ao amin'ny AutoCAD
Ny fifandraisana an-tserasera dia mety hiteraka fihetseham-po ratsy, indrindra ho an'ny mpilalao mafana izay mandany fotoana betsaka amin'ny lalao amin'ny aterineto. Na izany aza, misy fomba maro samihafa amin'ny fampihenana ny fahataperan'ny fifandraisana aterineto amin'izao fotoana izao. Ny iray amin'izy ireo dia manosihosy. Fanovana eo amin'ny sehatry ny ordinatera sy modem Ny fitsipika mifehy ny fampiasana "Throttle" dia manova ny fiovana sasany amin'ny fametrahana ny ordinatera sy modem mba ahafahana manatsara kokoa ny fifandraisana amin'ny Internet. Read More
Ahoana ny fomba hampandraisana anjara amin'ny vondrona VKontakte
Amin'ny fampiasana saha ambony indrindra amin'ny Excel
Copyright © 2019 PC thermo fitaovana
https://termotools.com mg.termotools.com © 2019